Salaaleetti WBO’n Waraana Mootummaa Hidhamaa Hidhaatii baasee ajjeesu irratti tarkaanfii fudhachuun himame. – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooSalaaleetti WBO’n Waraana Mootummaa Hidhamaa Hidhaatii baasee ajjeesu irratti tarkaanfii fudhachuun himame.
Salaalee Aanaa Kuyyuu Magaalaa Garba Gurraachaatti hidhattoonni sirna aangoorra jiruu nama hidhaatii baasanii ajjeesanii gataa jiraachuu jiraattota Aanichaarraa odeeffannoon nuqaqqabe nimul’isa.
Odeeffannoon jiraattota Aanichaarraa arganne kun akka ibsutti, Sadaasa 17, 2021 Galgala Humnoonni Sirna Bilxiginnaa tiksan, namoota lama hidhaatii baasanii ajjeesanii gataniiru.
Guyyaa kaleessaa ammo nama Obbo Amantee Gaarradoo jedhaman ilma keetu bosona jira sababa jedhuun, hidhaatii baasanii ajjeesuu isaanii odeeffannoon OMN qaqqabe ni mul’isa.
Obbo Amantee Gaarradoo, Abbaa Artist Jaalee Amantee (Kabbitoo) ta’uu isaanii ibsuun, hanga odeeffannoon kun nuqaqqabetti hawaasni reenfa isaaniillee akka hin kaasneef dhorkamaa jiraachuu, jiraataan aanichaa OMN’tti himaniiru. Obbo Amanteen maanguddoo waggaa 70 ta’uufi kanaan duras WBO waliin hidhata qabda, Galaafi Qoricha geessiteef sababa jedhuun hidhamanii turuun ibsameera.
Kana malees waraanni sirni aangoorra jiru garasitti bobbaase, har’a ganama mana barumsaa Garba Gurraachaa Sadarkaa 2ffaa seenuun barataa tokko qabanii ajjeesuu, reenfisaa akka hin kaanellee dhorkuu ibsaniiru.
Erga bulchiinsi Bilxiginnaa gara aangootti dhufee as Kuyyuu dabalatee, Aanaalee Oromiyaa garaagaraatti hidhamaa Siyaasaa mana hidhaatii baasanii ajjeesuun, reenfi akka hin kaane ittisuun bineensa nyaachisuufi Shakkamaa hawaasa duratti baasanii rashanuun, gocha hammeenyaa waraanni sirnichaa irradeddeebiin ummata Oromoo irratti raawwataa jirudha.
“Aanaa Kuyyuu qofatti bara 2021 keessa nama 20 oltu Shanee waliin hidhata qabdu sababa jedhuun hidhaatii baafamee ajjeefame” jedhu maddi odeeffannoo keenyaa.
Gama biroon, Salaalee Aanaalee garaagaraatti lolli jabaan, Waraana Bilisummaa Oromoofi Waraana Bilxiginnaa gidduutti geggeeffamaa ooluusaa, odeeffannoon Aanaalee Godinichaarraa nuqaqqaban ni mul’isu.
Aanaa Hidhabuu Abooteetti Sirni Biltsiginnaa Waraana dabalataa konkolaataa 18’n garasitti fe’uu hordofee lolli kaleessa eegale har’as itti fufee ooluu madden odeeffannoo keenyaa Aanicharra OMN’tti himaniru.
Lola kaleessa Aanichatti bakka Amuummaa Machaaraa, Dhangaggoo fi iddoowwan birootti geggeeffameen waraanni Bilxiginnaa miidhaa jabaa keessummeessuun reenfi isaanii Ambulaansii afuriin fe’amaa turuu, kan lubbuun hafan baqatanii of duuba deebi’uu jiraataan Aanichaa haala ture itti dhiheenyaan hodofaa turan himaniiru. Lolli jabaan waan tureef ummanni Ganda Dhangaggoorraa buqqa’ee gara magaalaa Ejereetti baqataa turuus ibsan.
Kaleessuma Aanaa Dagam Ganda Leemman Qarree Kooraattis Waraanni Bilisummaa Oromoo Kaampii loltoota Bilxiginnaa tiksanii irratti haleellaa raawwachuun sirnicha irratti miidhaa jabaa hordofsiisuu odeeffannoon qabnu nimul’isa.
Tarkaanfiin kun gara Aanaa Kuyyuu magaalaa Gabra Gurraachaattis cehuun, humna ummata nagaa hidhee dararsuufi hidhamaa mana hidhaatii baasee ajjeesu irratti haleellaan jabaan raawwatamuun ibsameera. Haleellaa bakka buufata waraana mootummaa irratti raawwatame kanaan ajajoota waraana sirnichaa yeroo dheeraaf ilmaan Oromoo dararaa dararaa turaniifi hidhamtoota hidhaatii baasanii ajjeesaa turan lama dabalatee loltoonni sirnichaa hedduun ajjeefamuu jiraattota aanichaarraa odeeffannoon arganne nimul’isa.
Salaaleetti lolli jabaan Waraana Bilisummaa Oromoofi Loltoota Bilxiginnaa gidduutti eegalame itti fufee jiraachuunis himameera.
WBOn tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhachuu ibsu illee gama isaan ...
Waraanni Bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhachuu ibsu illee gama isaan mootummaan deebii laachuu…